Microstation: aragtida ma laha hannaanka - Geofumadas
Farsamoyaqaan uun ayaa aniga ila hadlay, mid ka mid ah kuwa kaliya oo wacaya marka xididdada la gooyo oo aan qabo dhibaatadan:
Waxaan haystaa view, laakiin ogow in aadan haysan kantaroolka hoose zoom, buur yar aragtida ku habboon, ama baararka xawaaraha hoose ama ka dambeeya.
Waxaan u sheegay inuu i siinayo daqiiqado XNUM si uusan u isticmaalin wicitaanka, inkasta oo aan si daacad ah u sameeyey sidaas darteed anigu aanan ka xishoonayn. Waxa weeye in tani ay samaynayso warbixinta ay qof walba u keeni karto farsamo farsamo.
0 xal: daaqada lama yareeyo. Microstation daaqadaha ayaa si xor ah u dhaqaajin kara waxayna noqon kartaa qaybta hoose ee qarsoon. Soo saariddu waa in la xoojiyo aragtida.
1 xal: Doorashadu waa mid aan firfircoonayn Shaqada
Sidaa darteed, waa inaad doorataa:
-In Fursado u eeg, dhaqaajiso calaamadee sanduuqa taasoo tilmaamaysa "riix baararka on Daaqada View".
- Markaa "sax"
2 xal: Doorashadu waa mid madhan
Haddii weli xalinta kor ku xusan waxaad arkeysaa laab bar laakiin ma aha badhanka xakamaynta aragtida, ka dibna waa madhan. Tani waa inaad sameysid:
-Shaqada, u habeyn
- Kadib dooro tabka "muuqaal xuduud"
-Ku soo rogo daaqada bidixda midigta ku xiran kantaroolka aad rabto.
-Riix badhanka "badbaadi"
3 xal: Ma aha qaabka kaliya
Waa hagaag, haddii taasi xallin weydo, ka dibna waa niyadjab oo noqon kara mid fudud tip Hadda ma xasuusto, ama fayras badan oo la yimid cube tamarta ka mid ah tamarta.
Soo saarista ku-meelgaarka ahi waxay noqon kartaa aaladda xakamaynta aragtida, tan:
-Qalabka, xakamaynta kumbuyuutarka
-Waxay u muuqataa barkad lagu dhejin karo dhadhan kasta ama ay ka baxdo.
Dhanka kale waxaan fursad u helayaa inaan ku taliyo (laga bilaabo xalka 2) qalabka "sawir nuqul ah", Tan waxay kuu ogolaaneysaa inaad nuqul ka sameysid a view mid kale. Tusaale ahaan, waxaad doonaysaa inaad aragto aragti cusub, oo leh xadka mid ka mid ah kan hadda jira. Aad u macquul ah, xitaa ixtiraamka "aragtida muuqaalka"Maxaan ku heli karaa?
Post Previous«Previous 6 daqiiqado kalsooni ah ConstrucGeek
Post Next Maalgelinta Horumarinta MagaalooyinkaNext »